COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးရင် ကလေးရပါဦးမလား......... - Hello Sayarwon
COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးရင် ကလေးရပါဦးမလား.........
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေလည်း ထွက်လာပြီ။ နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုမှာ ကာကွယ်ဆေးတွေ ထိုးနှံပေးနေတဲ့အချိန်မှာ ကာကွယ်ဆေး ထိုးတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါကတော့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးရင် ကလေးရပါဦးမလား……… ဆိုတာပါ။
ဒီမေးခွန်းလေးရဲ့ အဖြေကို ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်လား…….
COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးရင် ကလေးရပါဦးမလား………
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးက ကလေးရရှိမှုကို ထိခိုက်စေတာမျိုး မရှိနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိသူတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ မေမေရော ဘေဘီလေးပါ ကျန်းမာစေဖို့အတွက် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကို ထိုးနှံတာက အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းတစ်ရပ်ပါ။ ဒါကြောင့် ကလေး မရမှာကို စိုးပြီး ကာကွယ်ဆေး မထိုးဘဲ နေတာမျိုး မလုပ်သင့်သလို ကာကွယ်ဆေး ထိုးလိုက်လို့ဆိုပြီး ကလေး ယူဖို့ကို ရွှေ့ဆိုင်းတာမျိုး လုပ်ဖို့လည်း မလိုပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးနေချိန်မှာ ပျံ့နှံ့လာတဲ့ သတင်းက အမျိုးသမီးတွေ အနေနဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးလိုက်တဲ့အခါ ကလေးရနိုင်ခြေကို ထိခိုက်သွားတယ်ဆိုတာပါ။ တကယ်ကတော့ ဒီသတင်းက မမှန်ပါဘူး။ Pfizer ကာကွယ်ဆေးကို စမ်းသပ်ထိုးနှံတဲ့အထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး ၂၃ ဦးဟာ အခုလက်ရှိမှာ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေကြပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေးကို (၂) ကြိမ်လုံး ပြည့်မီအောင် ထိုးထားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ကြပါတယ်။ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကြောင့် ကလေးရရှိမှုကို ထိခိုက်တယ် အထောက်အထား တစ်ခုမှ မတွေ့ရသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကလေးယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားလို့ ဆိုပြီး ကာကွယ်ဆေး မထိုးတာမျိုး လုပ်ဖို့ မလိုပါဘူး။
နောက်တစ်ချက်က ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတွေဟာ အခြားသူတွေထက် ပိုဖျားနာလွယ်တာကြောင့် ကိုယ်ဝန် မဆောင်ခင်မှာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံလိုက်တာက အကောင်းဆုံး ဖြစ်မှာပါ။
အမျိုးသမီးတွေမှာ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးတာက ကလေးရရှိမှုကို မထိခိုက်ဘူးဆိုတော့ အမျိုးသားတွေမှာရောလို့ မေးစရာ ရှိနိုင်ပါတယ်။
COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးတာက အမျိုးသားတွေရဲ့ မျိုးအောင်နိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေနိုင်မလား……..
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ကလေးရရှိမှုကို အဟန့်အတား မဖြစ်သလို အမျိုးသားတွေရဲ့ မျိုးအောင်နိုင်စွမ်း အပေါ်မှာလည်း သက်ရောက်မှု မရှိပါဘူး။
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးက အမျိုးသားတွေရဲ့ မျိုးအောင်နိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်မှု မရှိစေပေမယ့် ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ကတော့ အမျိုးသားတွေရဲ့ မျိုးအောင်နိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်က အမျိုးသားတွေရဲ့ မျိုးပွားမှုစနစ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ပါ။
ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်က အမျိုးသားတွေရဲ့ မျိုးပွားအင်္ဂါလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ကျဆင်းစေနိုင်သလို သုက်ပိုးထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း နဲ့ မျိုးအောင်နိုင်စွမ်းကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေး အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ ဖခင်ဖြစ်ဖို့ ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင် ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံထားတာက အကောင်းဆုံးပါ။
ကာကွယ်ဆေးက မျိုးအောင်နိုင်စွမ်းကို မထိခိုက်ပါဘူး။ ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ကသာ ထိခိုက်စေမှာပါ။
ဖေဖေ၊ မေမေဖြစ်ဖို့ ဆန္ဒရှိသူတွေအနေနဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကို ထိုးနှံထားတာက အကောင်းဆုံးသော အချက်တစ်ခုပါ။
Does the COVID-19 Vaccine Affect Fertility? Here’s What the Experts Say https://www.muhealth.org/our-stories/does-covid-19-vaccine-affect-fertility-heres-what-experts-say Accessed Date 12 August 2021
Coronavirus disease (COVID-19): Vaccines https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines?topicsurvey=v8kj13)&gclid=Cj0KCQjw6s2IBhCnARIsAP8RfAhYF_snqJgX07WfW4hAbG7PPZNn0x1on-4lQrfekUBlCaBVZjail1QaAok5EALw_wcB Accessed Date 12 August 2021
The COVID-19 Vaccine and Pregnancy: What You Need to Know https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/the-covid19-vaccine-and-pregnancy-what-you-need-to-know Accessed Date 12 August 2021
Pregnancy, breastfeeding, fertility and coronavirus (COVID-19) vaccination https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/pregnancy-breastfeeding-fertility-and-coronavirus-covid-19-vaccination/ Accessed Date 12 August 2021
ကိုဗစ်ကာလမှာ ဘာတွေ မစားသင့်ဘူးလဲ.......
ကိုဗစ်ကနေ ပြန်လည်ကျန်းမာလာတဲ့အခါ ကိုယ်ခံအား အမြန်ဆုံး ပြန်ပြည့်စေဖို့